Usephila ngamaphilisi ontshontshelwe usana - Ilanga News
Home Izindaba Usephila ngamaphilisi ontshontshelwe usana
Usephila ngamaphilisi ontshontshelwe usana
Owesifazane ucele ukumbambela ingane eyolanda isikhwama
NGUNTANDO Molefe okusolwa ukuthi untshontshwe ngowesifazane
“uFikile” ephuma emtholampilo ngoNhlaba.
UMFANEKISO wowesifazane osolwa ngokuntshontsha ingane kaNkz Molefe.
USEPHILA ngamaphi-lisi okwehlisa ukhwa-ntalala owesifazane waseMgungundlovu othi untshontshelwe umntanakhe obenezinyanga ezintathu ubudala ngowesifazane abexukuza naye emtholampilo i-East Boom, khona eMgungu-ndlovu mhla ka-16 kuNhlaba (May).
UNkz Nombulelo Molefe (25), waseCopsville, eMgungundlovu, utshele ILANGA ukuthi uphuma engena esibhedlela njengoba entshontshelwe ingane, uNtando Molefe, ngowesifazane omtshele ukuthi igama lakhe nguFikile.
Uthi usephila ngamaphilisi okulwa nokhwantalala nawokulala ngoba ubuthongo kabusehli ngenxa yokucabanga ngengane yakhe. Uthi uhlangane nalo wesifazane emtholampilo ngoMfumfu (October) nyakenye njengoba bebexukuza ndawonye.
“Sijwayelane emtholampilo no-Fikile. Besesijwayele ukubonana uma kuwusuku lwethu lokuyoxukuza. Ngosuku aduke ngalo uNtando, ngihlangane naye emthola-mpilo ethi uphelezele omunye umngani wakhe oyobeletha.
“Ngaleso sikhathi ingane yami ibinezinyanga ezintathu ubudala, ngimbuze ukuthi eyakhe ingane ikuphi njengoba besijwayele ukuxukuza ndawonye.
Ungitshele ukuthi ikubo kwa-yo eMatatiele. Ngenxa yokuthi besesijwayelene, sihambisene ngesikhathi sesigoduka, bengifuna ukudlula nasesiteshini samaphoyisa, okuthe sisendleleni ebheke khona ngabona ukuthi ngishiye isikhwama sikaNtando emtholampilo.
“Ngesikhathi ngiyosilanda, uFi-kile uthe ingane angiyishiye naye uzongibambela yona ukuze ngizoshesha,” kusho uNkz Molefe.
Utshele ILANGA ukuthi ngesikhathi ephuma ukuyolanda isikhwama sengane yakhe, uFikile nengane bebengasabonwa nangokhalo. Uthi umfonelile kodwa ucingo beselungasangeni, beseluphoseka egunjini lemiyalezo.
“Ngiphithe-ne ikhanda, ubuthongo kabehli njengoba ngilokhu ngicabanga ukuthi ngabe (umntanami) uyaphila yini lapho ekhona.
“Umoya wami uyothola ukuphumula uma ingane yami isitholakele. Ngicela ingane yami ibuye isaphila futhi ingalimele lapho ikhona ngo-ba kangazi ukuthi ngizoba yini uma yenziwa into ebuhlungu,” kusho uNkz Molefe.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthi likhona icala lokuthumba elivuliwe esiteshini samaphoyisa kuLoop Street, eMgungundlovu. Uthi liphenywa ngabeFamily Violence, Child Protection and Sexual offences Unit, okwamanje akhekho osaboshiwe.
Previous articleUSUTHU LUHLONIPHE ISILO NGEJEZI ELISHA
Next articleLuya kude olukaGordhan no-Adv Mkhwebane